China orinasa mpanamboatra & Welding Service orinasa sy mpanamboatra | Dongtai
Serivisy fanamboarana & fanenomana
Vidiny tsara indrindra ho an'ny indostrian'ny automatique - Custom automat ...
Vidiny ambany indrindra ho an'ny ampahany amin'ny sela plastika - Automa mahazatra ...
Fihenan-tsakafo farany ambany indrindra - Fahazoan-dàlana Custom ...
Vidiny mora indrindra amin'ny singa an-tsena aluminium - Custom automation ...
Ny vintana Dongtai dia manolotra serivisy matihanina sy fanamboarana matihanina manerantany. Manome vahaolana ampy tsara sy azo tanterahina ilaina amin'ny fanamboarana lamba vita ho an'ny fanamboarana. Nalahatra izahay hametrahana ny filàna lasantsy isan-karazany ao anatin'izany ny fametrahana ny seranan-tsarimihetsika mandeha ho azy.
Ireo mpamatsy fahaiza-manao tena tsara, voamarina dia manana traikefa ary mahay amin'ny serivisy fanaterana manokana, MIG / GMAW, TIG / GTAW ary Submerged Arc Welding (SAW).
Miankina amin'ny fahalalantsika momba ny welding ny mpanjifa mba hanome ny tsara indrindra kalitao mahafeno ny fepetra takiana manokana ary koa ny fenitry ny indostria samihafa. Miaraka amin'ny serivisy fanaterana, ny fahafaha-manao machining, mankaleo ary manome voninahitra antsika dia mahatonga antsika mpivarotra fiatoana.
Ho an'ny fanaterana haingana sy maika, dia manome serivisy serivisy an-trano ihany koa izahay toy ny plating, anodizing ary sary hosodoko.
• Gasikara Arc Welding Gas (GMAW) / MIG Welding
• Welding Gas Gas Arc (GTAW) / TIG Welding
• Fanamafisana Arc Welding (SAW)
• Tselatra w / 3 Rotary Welding
• automatique Port Welder
Serivisy fanarenana sy famandrihana faharoa
Manome serivisy famaranana maro hafa ihany koa izahay mba hahafahana manatanteraka ny fepetra ilaina amin'ny mpanjifanay - ireo mpiasa voaofana dia afaka manampy amin'ny tetik'asa metaly maro be sy ny fampiharana farany.
• Fitotoana Vary
• Fitsaboana hafanana
• Fampandrenesana lavaka kely
• fandefasana lavaka lalina
• Volafotsy may
• Fanamboarana maivana / haino aman-jery
• Fivoriambe maivana
Ireo machiniste za-draharaha sady voamarina dia manome serivisy fanampiny manome lanja fanampiny, ao anatin'izany:
Fanatrehana anatiny, ivelany sy ivelany ny famoronana misy fanaingoana azo atao.
Eo anelanelan'ny foibe sy ny fikorotanana tsy misy fotony
Fanamafisana ny induction
Fanamafisana ny lelafo
Fametahana Nickel Electroless
Anodizing sy Black Oxide
Mahatratra 16 ″ ny savaivony lavaka x 288 ″ lava (24 tongotra)
Afovoany kely sy lalina
Fanafihana basy, fihodinana lalina
Fahaiza-manao manovo fitaovana mavesatra hatramin'ny faha-45 an'ny HRC
Fahafahana mivezivezy hatramin'ny 288 ″ Midina amin'ny lavaka mandalo
Havitrika haavo manomboka amin'ny .750 ″ ka hatramin'ny 3.000 ″
Sandbternal & Sary
Fanapoahana baomba hanesorana ny maridrefy mill
Serivisy hoso-doko hoso-doko manomboka amin'ny coating coating
Ny fandoroana Plasma
Ny fanamainty / Jiro
Vita kely ny serivisy fanamboarana lamba vita amin'ny lamba kely.
Previous: Fanaka vy vita amin'ny vy
Manaraka: Vahaolana famaranana automatique
Fanamboarana Faritra vita amin'ny metaly
Fitaovana fanamboarana metaly
Fanamboarana lambam-by Metal